Esithangamini sokuhlangana ngobuchwepheshe bekukhona (kusuka kwesobunxele) uSolwazi uSihawukele Ngubane, uDkt u-Johannes John-Langba, uDkt u-Candice Moore noSolwazi u-Eugene Maafo Darteh.
I-UKZN isanda kuba nesithangami sokuxhumana ngobuchwepheshe, phecelezi i-webinar, ukubheka ukuthi i-Afrika iyithatha kanjani indaba yobhubhane i-COVID-19 nomphumela wayo kwezokuthula, ezokuphepha, ezempilo yomphakathi nezentuthuko yomphakathi.
Lo mhlangano ubuhlelwe nguSolwazi uSihawukele Ngubane wesiKole se-Arts lapho bekukhona ithimba longoti obekukhona kubona umHoli wezeMfundo kwezoCwaningo neziQu eziNkulu esiKoleni se-Applied Human Sciences e-UKZN, uSolwazi u-Johannes John-Langba, uMfundisi omKhulu esiKoleni se-Social Sciences uDkt u-Candice Moore noSolwazi u-Eugene Maafo Darteh womNyango wezifundo ze-Population and Healthe-University of the Cape Coast e-Ghana.
Ekuhlaziyeni iqhaza le-Afrika obhubhaneni i-COVID-19, u-John-Langba ubheke izibalo ezintsha ezivela e-Africa Centre for Disease Control and Prevention ezikhombisa ukuthi wonke amazwe ase-Afrika, njengoba engama-55, asebike izigameko zegciwane.
Ubalule izinselelo zezindlela zezempilo zomphakathi e-Afrika ezizobhekana nazo uma ingekho imali, abasebenzi abaqeqeshwe kahle nolwazi lwezifo olungaba yisisekelo sezinqubo, ingqalasizinda yezempilo enakekelwa kahle nohlelo lokusebenzisana nezinsiza zokwelapha ngendlela esezingeni eliphezulu nobuchwepheshe. ‘Amathuba okuthi izinhlelo zezempilo zezwekazi zithwale kanzima makhulu njengoba kubhebhetheka i-coronavirus uma sibheka isimo esintengayo sezempilo emazweni amaningi ase-Afrika,’ kusho yena.
U-John-Langba ugxile emsebenzi omqoka wezezempilo okukhona kuwona ukuhlinzeka ngezempilo, ukudala nokusebenzisa izinto zokusebenza, ukuxhasa ngemali ezempilo nomsebenzi wobuthunywa. Uthe ngokobhubhane i-COVID-19 ubuthunywa bohlelo lwezempilo lezwe lonke lumqoka kakhulu ukuqinisekisa ukunqanda ubhubhane ngendlela ehlelekile nesebenzayo. ‘Lo msebenzi uthinta kakhulu iqhaza likahulumeni lokuba yiso kanjalo nokulawula ukusetshenziswa kwezimpahla zezempilo, ukuqoqa nokuhlanganisa imininingwane.’
UDkt u-Moore uqale ingxoxo yakhe ngezinto ezithinta ukuthula nokuphepha, wagcizelela ubumqoka bobudlelwano obuhle phakathi kukahulumeni nomphakathi ngesikhathi sobhubhane i-COVID-19 ngokuthi uhulumeni uhlinzeke ngezempilo nokwazisa ngezinqumo ezithathwayo ngegciwane.
Ecaphuna ngendaba yezokuphepha kwabantu ngokuthi ezempilo, udlame nesimo senhlalo ziyimbangela enkulu yemibango, uDkt u-Moore uchaze ukuthi ingozi ngezokuphepha ivame ukuqhamuka ngabantu abantulayo emphakathini, ikakhulukazi ezokuphepha kwezempilo.
Ubale izinto ezintathu ezithinta ezokuphepha e-Afrika wathi yizindawo ezisemadolobheni ezihaqwe yimibango ngamathuba okuziphilisa, izindawo ezivele zinezimpi emazweni lapho kunezindlela ezintsha zokwenza izinto khona nokhetho okuhlelwe ukuthi lube khona kulo nyaka emazweni amaningi e-Afrika.
UDkt u-Moore uthe: ‘Kodwa akukubi kangako njengoba i-Afrika inamava ekubhekaneni nobhubhane olunjenge-Ebola kanti kube nemizamo esheshayo emazingeni aphezulu, okukhona kuwona i-African Union.’
Egcizelela imiphumela ye-COVID-19 emanyuvesi, u-Darteh ubheke izidingo zezitshudeni namandla ezikhungo zeMfundo ePhakeme ukwelekelela. Ugcizelele ubumqoka bokuthi amanyuvesi aphothule unyaka wokufunda nokuthi loku kusho ukuthini. ‘Kufanele sizilungiselele ukujwayela izindlela zokufundisa ezindala nezintsha,’ kushoss u-Darteh.
U-Darteh ubalule ubunzima izikhungo zemfundo ephakeme ezizobhekana nayo, wathi kudingeka inqubo yokufundisa ngezindlela zobuchwepheshe. ‘I-COVID-19 isifundise ukuthi singaxwayi ubuchwepheshe. Kudingeka siqinisekise ukuthi kuhlangabezwana nezidingo zazo zonke izitshudeni kanti kufanele kuqalwe manje!’